यो हो सबैभन्दा राम्रो ‘बिजनेस आइडिया’ : घुम्नुस, रमाईलो गर्नुस र महिनाको लाखौं कमाउनुस « Bizkhabar Online
यो हो सबैभन्दा राम्रो ‘बिजनेस आइडिया’ : घुम्नुस, रमाईलो गर्नुस र महिनाको लाखौं कमाउनुस
19 March, 2022 12:01 pm
काठमाडौं । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि घुमेर र रमाइलो गरेर मात्र पैसा कमाउन सकियो भने कस्तो होला ? यदि हो भने आजको ‘बिजनेस आइडिया’ तपाईको लागि हो । तपाईले यसरी नै युट्युब ब्लगिङमार्फत लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ । युट्युब ब्लगिङमा, तपाईंले आफ्नो जीवनशैली सबैलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । युट्युबमा यसो गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने हजारौं मानिस छन् ।
यो यस्तो व्यापारिक विचार हो, जसमा तपाईले धेरै यात्रा गर्नुहुनेछ र धेरै रमाइलो गर्नुहुनेछ र पैसा स्वतः आउनेछ । यद्यपि यसमा तपाईले केही मेहनत भने गर्नुपर्छ, तर यो तपाईको यात्राकै क्रममा हुने भएकाले निकै रमाइलो पनि हुन्छ । युट्युब ब्लगिङबारे यहाँ थप प्रकाश पर्ने प्रयास गरिएको छ ।
निसन्देह, यो विचार सुन्दा तपाईलाई धेरै हल्का लाग्न सक्छ । तर, थोरै मेहनतपछि मात्र तपाईले ठूलो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । युट्युबबाट धेरै पैसा कमाउने मानिसहरु धेरै छन् । नेपालमा धेरैले यो पेशालाई अपनाएका छन् र युट्युबमा सबै प्रकारका भिडियो राखेर लाखौं कमाइरहेका छन् । मानिसहरूले यस्ता भिडियोहरू पनि धेरै मन पराउँछन् । धेरै युट्युब ब्लगहरुका युट्यब सब्सक्राइबर लाखौं रहेको तथ्यबाटै पनि यस्ता भिडियोहरुको लोकप्रियता थाहा हुन्छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवन देखाएर पैसा कमाउन सकिन्छ
आफ्नो जीवनका पक्ष देखाएर पैसा कमाउने धेरै मानिस छन् । सौरभ जोशीले पनि त्यस्तै गर्छन् । लकडाउनको समयमा उनले आफ्नो परिवारसँग सामान्य भिडियो बनाएर युट्युबमा राखेका थिए, जसलाई जनताबाट राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको थियो । त्यसपछि उनले यस्तै भिडियो बनाउन छुट्टै युट्युब च्यानल (सौरभ जोशी भ्लग्स) सुरु गरे ।
यसमा उनले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन देखाउँछन् । घुम्न गए भने त्यहाँका कुरा देखाउँछन्, गाउँमा गए भने त्यहाँको जीवन देखाउँछन् । उनका यी भिडियोलाई मानिसहरुले निकै रुचाएका छन् । उनको प्रतिभा अर्थात् चित्रकला र चित्रकलाको भिडियो भन्दा धेरै मानिसहरूले उनको जीवनशैली भिडियोहरू मन पराउँछन् । लाइफस्टाइल च्यानलमा पोस्ट गरिएको उनको हरेक भिडियो लाखौंमा हेरिएको छ । सौरभ जोशीले युट्युबबाट हरेक महिना २५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् ।
युट्युबबाट कसरी कमाइ हुन्छ ?
युट्युबबाट आम्दानीको मुख्य स्रोत गुगलको विज्ञापन हो । यी विज्ञापनहरू भिडियोमा सानो तस्विर जस्तै देखिन्छन् र भिडियोको बीचमा चल्ने भिडियो विज्ञापनहरूबाट पनि मानिसहरूले पैसा कमाउँछन् । गुगलको खाता भएकोले प्रति विज्ञापन कति पैसा पाइन्छ भनेर कसैले बताउन सक्दैन । भिडियोमा देखाइएको तस्विर हेर्न र क्लिक गर्दा विभिन्न प्रकारका पैसा प्राप्त हुन्छन् । त्यस्तै, भिडियो विज्ञापन हेर्न र क्लिक गर्न छुट्टै पैसा प्राप्त हुन्छ । यदि कुनै विज्ञापनमा एप इन्स्टल गर्ने कुरा छ भने छुट्टै पैसा पाउँछ । अनुवाद गरिएको
आयातित नेपाली अर्थतन्त्रलाई अर्को मार : लगातार कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा, डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च
काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वबजारमा अमेरिकि डलरको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै
के हो पूर्व बजेट छलफल ? संसदमा किन हुँदैछ निरर्थक छलफल, तारानाथ दाहालको विचार
काठमाडौं । केही वर्षदेखि नेपालले अभ्यासमा ल्याएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी दस्तावेज सम्बन्धमा संसदमा